Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika zavakanto: The Bauhaus | Famoronana an-tserasera
Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika ara-javakanto: The Bauhaus
Fran Marin | | mpanakanto, Graphic Design
Imbetsaka izahay dia nizara tamina safidy vitsivitsy tamin'ireo logo manome aingam-panahy ary nisy fiantraikany tamin'ny dingan'ny famolavolana logo sy sary orinasa matetika. Na dia zavatra samy hafa aza ny famolavolana sy ny kanto, dia marina fa samy manana rohy tsy azo lavina ireo sampana roa ireo tsy azo ihodivirana izy ireo mamelona indray. Noho io antony io dia tiako ny mamakafaka ny sasany amin'ireo fifandraisana ireo amin'ny andian-dahatsoratra vaovao izay hifandraisanay ireo zava-kanto indrindra mifandraika indrindra tato ho ato amin'ny famolavolana logo.
Te-hanomboka an'ity manokana ity amin'ny sekoly misy solontena tena lehibe aho, Ilay Bauhaus izay hita taratra tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny endrika sary.
Raha ny etimolojia dia midika hoe "trano fananganana" i Bauhaus ary na dia sekolin-javakanto aza ny ankamaroany, ny tena marina dia nampivondrona taranja sasany hafa toy ny maritrano sy ny endrika. Ny niandohany dia nanomboka tamin'ny 1919 tany Alemana ary afaka nilaza isika fa ny rainy dia ny mpanao mari-trano Walter Gropius. Tsy sekoly fiankinan-doha io fa ny mifanohitra amin'izany dia niavaka ka hatramin'ny nandraisan'ny manam-pahaizana maro azy ny sekoly kanto sy ny endrika tsara indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Taorian'ny Ady Lehibe voalohany dia nikasa ny hampivelatra sekolim-panjakana kanto ho an'ny daholobe sy ny fanjakana i Gropius. Ny tena nandrisika an'ity tetik'asa ity ary tena nanisy soa ny famolavolana sary dia ny fampidirana ao aminy ireo sekolin'ny asa tanana sy asa tanana. Nanjary revolisiona tamin'ny ambaratonga rehetra izy io satria teo amin'ny sehatra sosialy dia nanakana ny karazana tsy fitoviana misy eo amin'ny olona fototra roa eo amin'ny tontolon'ny zavakanto: ny an'ny artista sy ny an'ny mpanao asa tanana. Mitovy amin'ny tarehin-javatra roa amin'ny ambaratonga iray, ny endrika sary dia heverina ho toy ny fironana ara-javakanto mizara mitovy lanja sy lanja mitovy amin'ny sary hosodoko na sary sokitra. Midika izany rehetra izany fa hatrany am-piandohana dia niteraka valiny lehibe teo amin'ny sehatry ny zavakanto ary tafiditra hatrany amin'ny adihevitra sy adihevitra. Ny marina dia tsy misy isalasalana fa ny fototra naroson'ny sekolinay dia ilaina, indrindra ny fandefasana azy amin'ny sehatra ara-tantara sy ara-tsosialy, herimpo lehibe avy amin'ireo mpisava lalana rehetra ireo. Ho fanampin'izany, ny fomba fiasa nampiasain'izy ireo dia manavao sy mamelombelona ny fomba fahatakarana ny taranja tsirairay tafiditra, zavatra izay nanintona ny sain'ny lafiny fanabeazana sy ny fampianarana ary nahatonga ny vondrom-piarahamonin'ny mpampianatra sy ny mpianatra tafiditra tamin'io fotoana io. Miaraka amin'i Gropius dia hatramin'ny niandohan'ny tarehin'ny Paul Klee, Vassily Kandinsky, ilay mpanao hosodoko sy mpamorona Oskar Schlemmer, na ilay mpamorona sy mpaka sary Moholy-Nagy; raha fintinina, ny sasany amin'ireo mpanakanto manavao indrindra tamin'izany fotoana izany.
1 Avy aiza i La Bauhaus ary inona no mampiavaka azy?
Avy aiza i La Bauhaus ary inona no mampiavaka azy?
Niorina tany Weimar, Alemana ny diantsika ankehitriny ary afaka nilaza izahay fa mihoatra ny ivon-toeram-pianarana na ny fironana akademika dia lasa filôzôfia na fomba fiainana, mitantana mihoatra ny fetra napetraky ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Mizara fitoviana sasany amin'ny postulatin'ny Art Deco izy ary fototra mazava ho an'ny fisehoan'ny minimalism taty aoriana (tadidio fa ity farany dia nipoitra taorian'ny Ady Lehibe Faharoa) satria anisan'ny mampiavaka azy indrindra sy ny lalam-pivoarany ny hevitra manamarina. Ny mpanakanto anay dia namorona ny fizotry ny famoronana avy amin'ny prisma izay nanandrana nanala sy nanakana ireo singa be loatra ireo mba hahatratrarana ny lozisialy amin'ny endriny amin'ireo singa fototra ao aminy. Etsy ambany dia ho hitantsika amin'ny fomba sary bebe kokoa ireto ohatra ireto namboarina tamin'ny famolavolana logo sy sary ary ny maha-izy azy teo amin'ny orinasa.
Raha jerena amin'ny zava-kanto, ny Bauhaus koa dia mampiditra ao anatin'ny tolo-keviny sasany ny andalana asa mitovy amin'ny ampiasain'ny Rosiana Mpiorina izay nisotro ihany koa tamin'ny fahatsorana sy fahasahiana rehefa nanao tolo-kevitra. Ny valin'ny asany dia mora fantatry ny besinimaro noho ny tsy fisian'ny firavaka sy ny endriny tsotra, mahery setra ary miaraka amin'izay koa. Amin'ny ambaratonga chromatic dia ahitantsika loko sy elanelana izay tena misolo tena, manasongadina ny loko mena sy ny loko mainty. Na dia tena solontena aza ireo safidy roa ireo, ny marina dia ny loko rehetra izay nisy famaranana madio ary anisan'ny fisaka sy mifanohitra nifangaro niasa tsara ho toy ny famantarana ho an'ity hetsika ity. Tao amin'ny sinema dia nisy ihany koa ny fiatraikany ary taratra tsara amin'izany ny sarimihetsika nataon'i Wes Anderson, indrindra ny The Tenenbaums, izay misy fampiasana maodely ny endrik'i Futura, endri-tsoratra izay na dia tsy noforonina tao amin'ny Bauhaus Eny aza dia novolavolaina Mandritra izany fotoana izany ary manana fifandraisana tena mahay mandanjalanja ary koa hatsarana avant-garde.
Araka ny nahitanao ireo fiasa rehetra ireo, izay takatra amin'ny ankapobeny, dia mbola hita ihany izy ireo amin'ny endrika maoderina, ohatra tsara dia tsara Fomba fady Faboo Taboo sy Axion.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika ara-javakanto: The Bauhaus
Fanoroana sary sy famolavolana ny famolavolana vokatra
Tsoratadidy tena mamorona 20